CC Shakuur, Shariif Xasan Iyo Cabdikarin Guuleed Oo Cabsi Soo Wajahday Hadii Muqdisho Imadaan - Banaadirsom
Home Arimaha Bulshada CC Shakuur, Shariif Xasan Iyo Cabdikarin Guuleed Oo Cabsi Soo Wajahday Hadii...
CC Shakuur, Shariif Xasan Iyo Cabdikarin Guuleed Oo Cabsi Soo Wajahday Hadii Muqdisho Imadaan
Warar hoose oo aan helnay ayaa sheegaya in C/raxmaan C/shakuur Warsame Hoggaamiyaha Xisbiga wadajir uu ka baaqday safar madaxdii ka qeyb gashay caleema saarkii Axmed Madoobe ku yimaadeen magaalada Muqdisho halka qaar kale ay ku laabteen meelihii kale ay ka kala yimaadeen.
C/raxmaan C/shakuur ayaa la sheegay sababo amni dartood uu kaga baaqday diyaaradii ka soo qaadi lahayd magaalada Kismaayo,waxaana diyaarada oo lagu magacaabo HALA AIRLINE la sheegay in hadda ka hor Qarax laga helay gudaheeda.
Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud, Sheikh Shariif iyo wafdi ay hoggaaminayaan ayaa shalay dib ugu soo laabtay magalaada Muqdisho ka dib caleema saarkii Axmed Madoobe.
Siyaasiyiinta caanka ah ee kala ah; Cabdiraxmaan Cabdishakuur, Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo Sheekh Shariif Axmed, ayaa kadib socdaalkooda Kismaayo waxay uga sii gudbeen magaaladda Nairobi ee dalka Kenya.
Xubnahan ayaa markii hore ka baxay Muqdisho, waxayna ka qeybgaleen caleema saarka madaxweynaha Jubbaland, Axmed Madoobe.
Dowladda Soomaaliya ayaa qaadacday guusha Axmed Madoobe, isla markaana qorsheyneysa in ay qabato doorasho kale oo xasaasi ah.
Cabsida Shariif iyo siyaasiyiinta kale ayaa ka dambeysay markii ay erayo xanaf leh ku tuureen dowladda mudadii ay socotay caleema saarkii Axmed Madoobe oo ka qabsoontay magaaladda Kismaayo.